हट्यो अन्योलता, भोलिदेखि मोटरसाइकलमा जोर-बिजोर लागू !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/हट्यो अन्योलता, भोलिदेखि मोटरसाइकलमा जोर-बिजोर लागू !!
हट्यो अन्योलता, भोलिदेखि मोटरसाइकलमा जोर-बिजोर लागू !!
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमा`कान्त अधिकारीले मन्त्रिप`रिषद्को निर्णयलाई थप स्पष्ट पार्दै मोटर साइकलमा पनि जो रबिजोर प्रणाली लागू हुने गरी निर्णय भएको जानकारी दिए । यसैगरी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले सोमबार देखि मोटरसाइकलमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न गृहमन्त्रालय बाट निर्देशन आएको बताए ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटर साइकलमा एक जना मात्रै सवार हुनुपर्ने निर्णय गरेपनि जोर बिजोर लागू हुने या नहुने स्पष्ट गरेको थिएन। जसका कारण सर्वसाधारणमा अलमल रहेको थियो । यस्तै कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि अलमलमा रहेको थियो । गत बुध बारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै निजी सवारीसाधनहरु जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
भाडा बढाएर सार्वजनिक यातायात चलाउने सरकारको तयारी, मास्कको प्रयोग अनि वार्य